Tiketi OBB na-ere ọnụ ala na ọnụ ahịa njem | Save A Train
Home > Tiketi OBB na-ere ọnụ ala na ọnụ ahịa njem
OBB ụgbọ oloko ugboro ugboro na Vienna – Graz, Salzburg – Vienna, Linz – St. Polten, Graz - Salzburg. Nwekwara ike iji ụgbọ oloko OBB banye mba ndị agbata obi gị n'ime Europe.
Number 1: Detuo tiketi OBB tupu ị nwee ike
Number 2: Njem site na OBB n'oge oge kachasị-elu
OBB ụgbọ oloko na-bụ dị ọnụ ala karịa n'oge oge kachasị elu, na mmalite nke izu, ye ke uwemeyo. Can nwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta ọnụ ala gbaa ụgbọ okporo ígwè n'ime izu. Na tusde, Wenezde, na Tọzdee, OBB ụgbọ oloko na-enweta akụ na ụba. N'ihi olu nke ndị njem azụmaahịa na-aga ọrụ n'ụtụtụ na mgbede, Tiketi ụgbọ oloko na-efu ihe. Ọ dị ọnụ ala karịa ịga njem n'oge ọ bụla n'etiti ụtụtụ na anyasị. Oge ngwụsị izu bụ oge ọzọ kachasị elu maka ụgbọ oloko, tumadi na Fraịdee na Satọde. OBB train ticket prices also increase on ezumike ọha na eze na ezumike ụlọ akwụkwọ.
Number 3: Denye tiketi maka OBB mgbe ijiri usoro nhazi njem gị
Number 4: Zụta tiketi gị nke OBB na Save A Train
OBB tiketi na-amalite site na € 1,5 ruo ihe dị ka € 51 maka njem ụgbọ oloko. The ọnụahịa nke ụgbọ oloko ụgbọ njem OBB dabere na ụdị tiketi ịzụrụ na mgbe ịchọrọ ịga njem:
OBB Komfort tiketi bu tiketi OBB mgbe nile, a na-achụkwa ha maka njikọ site na ụgbọ oloko abalị. The OBB Komfort ticket covers the cost of the journey, ndoputa na udi nke njem ahọpụtara, na nri ụtụtụ n'ụlọ anwụ na-ehi ụra.
Ndị njem nwere ike ịzụta Osterreichcard Classic. Na otu Osterreichcard Classic, ha ga anata ego nke 100% on the cost of seat reservations for 1st and 2nd class. With an Osterreichcard Classic 2nd class, ịnata a 50% mwepu ego na mgbanwe nke klaasị si na klas nke abụọ ruo na nke mbụ.
Salzburg isi ọdụ ụgbọ oloko (Salzburg Central Station) dị n'etiti etiti obodo nke abụọ buru ibu na Austria – Salzburg.
Ọ bụrụ n’ị gụrụ ebe a, knowmara ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụgbọ oloko OBB ma dịrị njikere ịzụta tiketi ụgbọ okporo ígwè OBB na Save A Train